Daawo: Ciidanka Turkiga oo Suuriya ku Qaaday Howlgalkii ugu Cuslaa, Kadib markii Maraykanku ka baxay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Daawo: Ciidanka Turkiga oo Suuriya ku Qaaday Howlgalkii ugu Cuslaa, Kadib markii Maraykanku ka baxay
Oct 9, 2019 - Aragtiyood
Ankara ( Kalshaale ) Ciidamada Dawladda Turkiga ayaa billaabay howl-galkii militari ee muddada la qorsheynayey ee Waqooyiga Suuriya, si looga sifeeyo ciidamada Kurdish-ka ee ay ugu yeedhaan argagixisada.
Madaxweyne Reccep Tayyip Erdogan ayaa ku dhowaaqay billowga howl-galka, oo uu ugu yeeray “Guga Nabadeed”, waxaana uu sheegay in looga dan leeyahay cirib-tirka halista argagixsada ee ka dhanka ah Turkey, Waxaana deegaanada la Xoraynayo la Qorsheeyay in dib u dejin loogu sameeyo Qaxootiga Suuriya ee ku sugan Gudaha Turkiga.
Ciidamada Dimoqraadiga Syria (SDF) ee Kurdish-ka ay hoggaamiyaan ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Turkiga ay garaacayaan goobo shacab, Wuxuuna Howlgalkan militari ayaa billowday maalmo kadib markii Aqalka Cad ee Mareykanka uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay in ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan gobolka, si ay dhabbaha ugu xaaraan howlgalka Turkiga.
Madaxweyne Trump ayaa weli difaacaya go’aankiisa, xilli aad looga dhalleeceeyey gudaha Mareykanka, isaga oo yidhi “Dagaalladeenna aan dhammaadka lahayn ee doqomeed, waa ay dhammaanayaan”
“Dagaallo u dhaxeeya kooxo badan oo kala duwan oo socday muddo dheer Mareykanka marnaba ma ahayn inuu joogo Bariga Dhexe. Waan la baxnay askarteena. Turkey waa inay la wareegaan dagaalyahannada Daacish ee la qabtay ee Yurub ay diiday inay dib ugu laabtaan” ayuu yidhi Trump.